Mandroaka ny tahotra ny fanatrehany
"Koa mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao." - Jos. 1:9.
Ny fahatsapana ny fanatrehan'Andriamanitra irery ihany no mandroaka ny tahotra, izay mety hahatonga ny fiainan'ny ankizy osa iray ho enta-mavesatra . Aoka hipetraka tsara ao amin'ny fitadidiany ilay teny fikasana manao hoe: "Ny anjelin'i Jehôvah mitoby manodidina izay matahotra Azy, ka mamonjy azy". Aoka izy hamaky ny tantara mahagagan'i Elisa tao amin'ilay tanana feno tendrombohitra. Tamin'izay mantsy dia nanelanelana azy sy ireo tafiky ny fahavalo marobe, ny tafiky ny anjelin'ny lanitra izay nanodidina azy ireo. Aoka izy hamaky ny fomba nisehoan'ny anjelin'Andriamanitra tamin'i Petera, raha tany am-ponja izy ary voaheloka ho faty. Ny fomba nandalovany manoloana ny mpiambina mirongo fiadiana, ireo varavarana sy vavahady vy makadiry miaraka amin'ny hidiny sy ny baraviny, ary ny nitarihan'ny anjely ilay mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny toerana azo antoka. Aoka izy hamaky ny amin'ilay zava-niseho teny an-dranomasina, raha teny an-dalana ho any amin'ny fitsarana sy ny famonoana azy i Paoly. Teny mahafinaritra izay nitondra hery sy fanantenana no nolazainy tamin'ireo miaramila sy tantsambo nasafotofoton'ny tafio-drivotra sy trotraky ny asa mafy ary efa tsy nihinan-kanina andro maro: Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky; fa tsy hisy ho faty hianareo (...) Fa nisy anjelin'Andriamanitra, Izay Tompoko sady tompoiko, nitsangana teo anilako halina ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'i Kaisara hianao; ary, indro, efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao». Tamin'ny finoana io fampanantenana io no nanomezan'i Paoly toky ireo niaraka taminy "Ary tsy hisy ho very aminareo na dia singam-bolo iray akory aza". Dia tanteraka izany. Koa satria nisy lehilahy iray izay azon'Andriamanitra nampangaina tao amin'io sambo io, dia avotra avokoa ireo miaramila sy tantsambo maro mpanompo sampy (...)
Ampianaro ireo izay tsy manana toky ka manjary mihemotra manoloana ny adidy aman'andraikitra noho izany tsy fatokian-tenany izany, mba hiantehitra amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay, dia ho maro amin'izy ireny no ho afaka hilaza miaraka amin'ny apôstôly Paoly manao hoe: "Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'i Kristy izay mampahery ahy". - Ed, tt. 255,256.